Daawo Sawirro: Taageerayaasha Hillary Clinton oo la yaaban natiijada cododka iyo guul Daro usoo ifeysa Xisbigeeda!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Taageerayaasha Hillary Clinton oo la yaaban natiijada cododka iyo guul Daro usoo ifeysa Xisbigeeda!!
Daawo Sawirro: Taageerayaasha Hillary Clinton oo la yaaban natiijada cododka iyo guul Daro usoo ifeysa Xisbigeeda!!
Nov 09, 2016WARAR
Donald Trump ayaa ku horeeya 244 cod, halka Hillary Clinton ay leedahay 215, waxaa Trump qarka u saaran yahay inuu ku guuleysto doorashada Madaxweynaha Mareykanka.
Illaa afar gobol ayaa dhiman natiijada codka in lagaga dhawaaqo, waxaana afarta gobol, hadii labo ka mid ah Donald Trump ku guuleysto ay noqoneysaa mid Donald Trump u cadaata inuu ku guuleystay Madaxweynaha Mareykanka ee soo socda.
Previous PostCiidamo Itoobiyaan oo dhimasho & dhaawac u geystay qoys Soomaaliyeed oo ka koobán Aabe, Hooyo & Caruurtiis!! Next PostDaawo Sawirro: Magaalo kutaala Soomaaliya oo noqotay halka ay ku yaalaan Guryaha ugu qaalisan dhanka Kirada iyo sababta!!